Ipipi | UMaxwell
Ama-dyes, asetshenziselwa ukufaka imibala ku-fiber noma ezinye izinto, ahlukaniswe izinhlobo ezimbili - udayi wemvelo namadayi okwenziwa, kufaka phakathi udayi osebenzayo, udayi we-vat, udayi wesibabule, udayi we-phthalocyanine, udayi we-oxidation, udayi we-condensation, udayi wokusabalalisa njll.
I-Pigment iyithuluzi le-powder elinombala we-colorablity kanye nesembozo sokumboza, esingenakunyakaziswa kepha simiswe emanzini, amafutha, i-resin, i-organ solvent kanye nokunye. Umbala uhlukaniswe ngokombala wezinto ezingafani kanye nokwe-organic pigment. Ama-pigment we -organic ahlukaniswe i-oxide, i-chromate, i-sulfate, i-silrate, i-borate, i-molybdate, i-phosphate, i-vanadate, i-iron cyanates, i-hydroxide, i-sulfide,
I-Metal, njll. Futhi i-organic pigment ihlukaniswe imibala ye-azo, i-phthalocyanine pigment, i-anthraquinone pigment, imibala ye-indigo, i-Quinacridone pigments, i-Polycyclic Pigments efana ne-oxazine-Ⅱ, I-Fang methane pigments njll ngokuya ngokwakhiwa kwamakhemikhali .;
Umkhakha uhlinzeka ngezinsizakusebenza nezinsizakalo zephrojekthi ye-turnkey zedayi nezamabhizinisi akhiqiza imibala .;
Sinikeza konke okukhiqizwayo kwesitshalo, insizakalo yokwakhiwa kobunjiniyela, ukuvuselelwa kwefekthri, izinsiza zokunwebisa, izinsizakalo zokubonisana ngokuphathwa kwamaphrojekthi, izinsizakalo zokuqamba ukuxazulula ubunzima obudaywe ekukhiqizeni udayi kanye nakumbala.
Isisetshenziswa Esikhulu Nokwazisa Umsebenzi
I-Blender: Isetshenziselwa ukuxuba i-powder ne-powder, i-powder exutshwe nenani elincane le-ketshezi. Ngokukhokhisa uketshezi, Imboni iklame indlela yokufafaza engafani yokulinganisa ukuze ithuthukise ukusebenza kahle kokuxubana kanye nokufana; I-mixer inezincazelo eziphelele ezibandakanya imishini yokusebenza kanye nohlobo lokukhiqiza. Izinhlobo ezinhlobonhlobo, kufaka phakathi umkhiqizo omanyingi we-hybrid onjenge-vertical kanye nendawo evundlile yokuhlangana. Ungakhetha umshini ofanele kakhulu ngokuya ngenqubo yokukhiqiza nezakhiwo zezinto ezibonakalayo.
Umguquli: Kubandakanya ukudluliswa kwe-pneumatic (ingcindezi, umfutho omubi, isigaba esiminyene nesigaba sokuxutshwa) kanye nokudluliswa kwemishini (isikulufa, ibhakede, iketanga nebhande)
Umshini wokumba: kufaka phakathi isihlungo se-rotary vibration, ngesihlungo somoya, imininingwane ehlukahlukene iyatholakala.
Umshini wokupakisha: ufaka isikhwama se-valve nomshini wokupakisha isikhwama ovulekile ophezulu. Ngokusekelwe ebangeni lokugcwalisa, ihlukaniswe yaba ngu-5kg, kuze kube ngu-50 kg nokufakwa kwephakethe lethoni.
I-Disererer: Ngokuhlakazeka kwemibala engaphambili. Izinhlobo ezahlukahlukene nokucaciswa kungakhethwa kufaka phakathi i-Diserser nge-scraper, i-Vacuum Type Diserser, i-Dual-shaft Diserser ene-Butterfly agitator, uhlobo lwePlatform Displayer njll kuyatholakala ukuhlangabezana nezidingo ezahlukahlukene zokusabalalisa.
I-High-shear Emulsifier: esetshenziselwa ukuhlakazeka kwe-pigment, homogenizing, emulsifying and Refining, ihlukaniswe ngohlobo lwe-batch nohlobo lwangaphakathi; uhlobo lwe-batch hlobo emulsifier lingahunyushwa ngokwezifiso lube ngohlobo lwe-kettle oluhlotshiswe ngokuxhumanisa nezinhlobonhlobo ze-agitators ukufeza umshini owodwa onemisebenzi eminingi; i-emulsifier nayo ingahle yakhelwe uhlobo lwe-vacuum, olutholakalayo lokushisa nezinye izinhlobo eziningi ngokuya ngezidingo ezahlukahlukene zokukhiqiza.
I-Basket Mill: Uhlobo lwemishini yokugaya emanzi, luhlanganisa ukusabalalisa nokugaya izinqubo ezimbili emshinini owodwa. Iyanciphisa inqubo yokukhiqiza futhi futhi ngaphandle kwepompo noma i-valve, ngakho-ke ithuthukisa ukusebenza kahle nokukhiqiza futhi inciphise imfucuza yezinto ezibonakalayo. Ngaphandle kwalokho, kulula ukuyihlanza, okwenza ilunge kakhulu ngezidingo zokukhiqiza zezinhlobo eziningi zemikhiqizo ngevolumu encane .;
Imigqa Yobuhlalu Ovundlile: Umshini wokugaya omanzi osetshenziselwa ukugaya i-pigment ngezidingo eziphakeme kakhulu zokugcina. Kungenxa yokugaya umphumela omuhle kakhulu. Yimishini esetshenziswa kakhulu yokugaya izimakethe emakethe kufaka phakathi uhlobo lwe-Disc Izinhlobo Horizontal Beads Mill ne-All-round Horizontal Beads Mill.
Umugqa wonke ungaba inhlanganisela yemishini eyodwa noma umugqa wokukhiqiza ozenzakalelayo nobuchwepheshe bokukhiqiza obuthuthukisiwe kufaka phakathi uhlelo lokuphakelwa kwezinto zokwakha, uhlelo lokulinganisa, uhlelo lokusabalalisa nokugaya, uhlelo lokuxubha nolunye lwezinto eziningi, uhlelo lokuhlanza, uhlelo lokulawula oluzenzakalelayo, uhlelo lokugcwalisa oluzenzakalelayo njll. kususelwa esigabeni se-pigment nezidingo zokukhiqiza.